Streaming video Torrent Software ee fiirinaya online oo ka mid ah filimada iyo TV muujinaysaa in hab-socodka ah ee download. Software waxay leedahay badan oo content video jawabo kala duwan oo ay hubisaa in loo maqli ah oo tayo sare leh.
Streaming video Qabashada Screen Qalabka ayaa in lagu soo qabto video ka shaashadda kombuyuutarka aad. Software ayaa awood u baahinta falalka ka shaashadda adeegyada video caan ah.
Streaming video Games Adeeg ciyaaraha daruurtii in Radidiyaha kulan ku technology ee video qulqulaya. Software waxay bixisaa loo maqli karo oo ka mid ah kulan ugu hawl badan ee ay hindiseen oo la soo koobin nidaamka hooseeyo.